Yintoni ilayibrari ye-YouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ithini ilayibrari yeYouTube?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 468
Ngaba ufuna ukufumana okungcono kwi-YouTube? Emva koko kuya kufuneka ufunde ukusebenzisa "isixhobo seThala leencwadi" esisebenzisa eli qonga levidiyo lisasazwayo. Ukuba unomdla wokwazi ukuba yintoni lo msebenzi kwaye wenzelwe ntoni, hlala nathi.
Ithala leencwadi le-YouTube yenye yeefayile ze- Ezona zixhobo zilungileyo sinokusinikwa sisicelo. Ngayo sinokukhetha ukufikelela kwiindidi ezahlukeneyo zomxholo, kubandakanya imbali yethu yokudlala kwakhona, iividiyo ezigciniweyo kunye noluhlu lokuvelisa kwakhona okusebenzayo.
Yintoni ithala leencwadi likaYouTube?
Kuninzi okuthethwa ngesi sixhobo kodwa bambalwa abaziyo ubungakanani enokuba nabo ukuba isetyenziswe ngendlela eyiyo. Ngokusisiseko ngumsebenzi apho sinokuthi siququzelele ngcono umxholo ngamnye weqonga.
Ithala leencwadi le-YouTube liyasivumela ukufikelela kwirekhodi epheleleyo yazo zonke iividiyo esizijongileyo eqongeni. Ikwasinika ithuba lokubona iividiyo zethu zilayishwe kwisicelo kunye nohlu lokudlalwayo esisebenzayo.
Ufikelela njani kwilayibrari yeYouTube
Ukufikelela kwilayibrari yethu yeYouTube kulula kwaye kuyakhawuleza. Singayenza ukusuka kwidesktop yedesktop okanye nakwisicelo esifakwe kwizixhobo zethu eziphathwayo.
Ukuba ufuna ukungena kwilayibrari yakho isuka kwi-PC Kuya kufuneka ulandele la manyathelo asebenzayo:
Ukufikelela kwiakhawunti yakho
cofa ngentla kwemigca emithathu ethe tyaba (kwikona ephezulu ngasekhohlo kwesikrini)
Sinokufikelela kwilayibrari ngokuthe ngqo kwi sicelo se sithuthi Ukusuka kwiYouTube. Ukwenza njalo kulula:
Vula usetyenziso lweYouTube kwiselfowuni yakho
Emazantsi kwesikrini uya kufumana ezininzi ukhetho
Cofa ku "Biblioteca"kwaye ilungile
Amacandelo eLayibrari ye-YouTube
Emva kokungena kwilayibrari yethu ye-YouTube Siza kufumana izixhobo ezininzi ezinomdla. Nanga amanye amacandelo aphambili afakwa lolu khetho:
ImbaliApha unokufikelela kwimbali epheleleyo yokuzaliswa kwakhona. Zonke iividiyo osandula ukuzibukela ziya kuvela ngokulandelelana kwazo.
Bona kamvaIividiyo ogqibe kwelokuba uzigcinele ukubukela kamva ziya kuvela kweli candelo.
Uluhlu lokudlalaUngafumana lonke uluhlu lokudlalwayo olwenzileyo eqongeni.
Iinqwelo zokuthengaUkuba uthenge umxholo, ungafikelela kule folda.
Iividiyo endizithandayo: Ukuba "uyithandile" ividiyo ye-YouTube iya kuvela kolu luhlu.
Izibonelelo zokusebenzisa ilayibrari yeYouTube
Sebenzisa ithala leencwadi le-YouTube unakho sincede sifumane izibonelelo ezininzi, ngakumbi ukugcina umxholo wethu ucocekile ngaphakathi kweqonga.
Esi sixhobo sisivumela ukuba si-odole wonke umxholo esiwubonileyo kuYouTube, gcina ezo vidiyo sifuna ukuzibona kamva. Sinokufikelela ngokulula ngakumbi kwimbali yethu yokudlala kunye neevidiyo zethu ezithunyelwe kwisitishi.
1 Yintoni ithala leencwadi likaYouTube?
2 Ufikelela njani kwilayibrari yeYouTube
3 Amacandelo eLayibrari ye-YouTube
4 Izibonelelo zokusebenzisa ilayibrari yeYouTube
Iyintoni impumelelo yePinterest njengonxibelelwano lwasentlalweni olusekwe kuyo?
Ungamanyanisa njani iiakhawunti ze-Twitter?